Quickspin: Glyph ọla edo two (RTP: 96.09percent ) - cheapinternetsecuritysoftware.com
Golden Glyph two bụ usoro nke Quickspin’s Golden Glyph. Dị ka nsụgharị mbụ ya, igwe oghere a na-agbaso nzọụkwụ unn’ahịa ma na-enye Quickspin mpako. Ebe ọ bụ na nke a bụ ihe na-aga n’ihu, isiokwu nke egwuregwu ahụ ka bụ otu mana egwuregwu ya na atụmatụ ya ka mma. Yabụ, ọ na-ekwe ndị ahịa ndị nọ ụyọkọ ụyọkọ nkwa karịa.
Reels: 7Rows: 7RTP: 96.09% Min nzọ: Number 0.2Max nzọ: # 100Paylines: Cluster PaysMax triumph: 26,800xVolatility: Moderate ebọchị mpụta: June 8, 2021
Ọdịdị Golden Glyph two
Egwuregwu a nwere isiokwu Egypt Ancient nke gosipụtara ụfọdụ akara ngosi ndị metụtara isiokwu ya. N’ezie, egwuregwu ahụ na-egosi ọzara Ijipt yana Great Pyramids. Ihe nnọchianya un nke na-akwụ ụgwọ dị ala gụnyere ihe oyiyi nke agwọ, ankh, Horus, anya, na mmiri. Ihe nnọchianya un ndị na-akwụ ụgwọ dị elu gụnyere ihe oyiyi nke Queen, Fero, na Horus.
Ọzọ akara na ị ga-agba akaebe na esi anwụde bụ W akara na nku. Anụ a nwere nku bụ akara ngosi pụrụ iche nke na-anọchi akara niile d e akara mgbe niile iji meziwanye egwuregwu gị.
Golden Glyph two atụmatụ
Mgbe ịlaghachin’ala ndị Fero, ihe ga-emen’ọdịnihu ga-egosi gị egwuregwu egwuregwu ọla edo nwere akara 7 t ahịrị asaa. Egwuregwu a na-egosipụta ụyọkọ ụyọkọ nke a makwaara dị ka Tumbling Reels. Enwekwara ike Glyph, Power-Up, na Golden Bonus Spins. Wezụga isi atụmatụ ndị a, enwerekwa obere atụmatụ dịn’okpuru ebe a nwere ike mezue ahụmịhe Golden Glyph two gị.
A makwaara dị ka Tumbling Reels, atụmatụ a na-emepụta ụyọkọ mmeri mgbe ị na-atụgharị anya. Mgbe ọ bụla etinyere atụmatụ aga-ewepụ akara niile nke so na nchikota mmeri website t ntụpọ. Nke a t – enye ohere maka akara ọhụụ dabara na ọghọm niile na -adị.
Dika akara ngosi ohuru juputara igwe egwu, enwere ohere mgbe nile maka nchikota ndi ozo igha. Igwe na-ada ada ga-anọgide na-arụ ọrụ ma ọ bụrụhaala d e enwere mmeri ọhụrụ d e ntụgharị ọ bụla. Yabụ, atụmatụ that a ga – akwụsị ozugbo ịnwetaghị ụyọkọ mmeri ọhụrụ na otu ntụgharị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado ihe na-agbanwe agbanwe, Power Glyph nwere ike ịdọrọ mmasị gị. Njirimara a nwere ike ịpụtan’oge egwuregwu egwuregwu t self. Ike Glyphs nwere ike ịrụ ọrụ dị ka akara nnọchi maka akara ngosi oge niile na ala na ọnọdụ ebe ụyọkọ mmeri na-etolite. Ọzọkwa, a na-arụ ọrụ Njirimara Power-Up ozugbo na-ewepụ Electricity Glyph na ntanetị.
Ihe mmeri gị na Golden Glyph nwere ike ịbawanye ngwa ngwa website Id njirimara Power-Up. Ntughari ọ bụla nwere ike inye gị akara ngosi 7 Power-Ups na igwe na-agba ọsọ. Ogbe mbu t 6 Power-Ups na-agụnye akara ngosi mgbe niile na Golden Scarabs ma ọ bụ ụkpụrụ nke Horus. Ga-enweta Power-Up ọzọ mgbe otu ụyọkọ mmeri agaghị eme na ntụgharị ọzọ.
Ga-enweta ụgwọ ọrụ Power-Upn’usoro nke dị ka ihe odide ndị Ijipt na ahịrịn’okpuru nnukwu okporo. Ihe nnọchianya ndị that a gbanwere na ntụgharị ọ bụla ma ọ bụrụ d e ọtụtụ Power-Ups pụtara, akara ọ bụla nwere ike igwu egwu. Lelee ihe njirimara a na-enye:
Gigantic Wild Power-Up = Njirimara a ga-etinye nnukwu akara anụ ọhịa na-enweghị atụGolden Scarab Power-Up = Ike a ga-enye gị akara anọ 4 ruo 10 na gridPatterns of Horus Power-Up = Akụkụ a ga-ewepụ akara na-etolite ụkpụrụ. Patternskpụrụ ndị that a dịgasị iche website t obe, anya, nnụnụ, hourglass, agwọ, na ankh.Golden Glyph = Dịka aha un na-egosi, ndị Golden Glyphs na-anọchite anya ya. 1 to 4 Golden Glyph Wild akara ga-egosi na esi anwụde.
Ọ bụrụ na Glyphs 4 Golden pụtara, ị ga-enweta otu ntụgharị ọzọ. Ga-enwetakwa 1 Glyph Golden na mbido mbụ gị n’oge atụmatụ ịgba gburugburu. Mana ihe puru iche banyere akara a bu t o raparan’azu rue mgbe I jiri ogho ogwu gi nile. N’ihi ya, a makwaara nke a dị ka Jumping Wild nke nwere ike ịwụli n’ọnọdụ dị iche na ntụgharị ọ bụla.
Ntinye self service ọla edo
Iji tinye self service gburugburu, ị ga-achọ akara ngosi 3 gbasaan’oge otu ntụgharị nke Nnukwu Pyramid na-anọchi anya ya. Ozugbo atụmatụ a malitere, ị ga-enweta 7 Bonus Spins. I nwekwara ike retrigger a atụmatụ iji nweta ọzọ spins ma ọ bụrụ d e 3 ọzọ agbasasị akara na-egosi na okporo. Oge a, ị ga – enweta 5 Spins Bonus Spins nke ga – agbakwunye na mkpokọta gị.
Dị ka anyị kwurun’elu, ị nwekwara ike ịnweta mgbakwunye na ikike Power-Up Golden Glyph. Ozugbo arụ ọrụ, atụmatụ that a ga-enye gị Spins Spins ma ọ bụrụ t 4 Golden Glyphs rutere na wiil.
Golden Glyph two RTP, ịkụ nzọ, na onyinye
Golden Glyph two bụ oghere vidiyo nwere sistemu ụyọkọ ụyọkọ. Nwere ike ịdata mmeri na egwuregwu a website d e ịme ụyọkọ mmeri t 5 ma ọ bụ karịa akara akara na ntụgharị ọ bụla. Could nwere ike ịgbagharị na-esi anwụde ma họrọ nke kacha nta nzọ bụ # 0,20 na kacha nzọ nke # 100.
E jiri ya tụnyere ụdị nke mbụ na 96.19percent RTP, Golden Glyph two nwere obere RTP nke bụ 96.09percent naanị. Mana agbanyeghị na RTP nke ụdị nke abụọ a belatara, ọ na-abawanye website Id ọkara t ọkara-ọkara. Akụkụ ndị bụ isi nwere ike ịmepụta ihe dịka 45.43percent mmeri ebe Bonus Spins nwere ike ịmepụta ihe 32.56percent merie. Ka ọ dị ugbu a, mmeri egwuregwu egwuregwu nwere ike iwepụta ihe ruru 18.11percent nke mmeri naanị website Id RTP ya.
Ya only, Golden Glyph two nwere 4n’ime 5 ọkwa nke volatility. N’aka nke ọzọ, onye nrụpụta egwuregwu a mere ka oke jackpot un na-anwa ndị ahịa. Ọ bụrụ na enwere mmasị t shirt kacha elu nke Golden Glyph, ụdị nke abụọ a nwere ike inye gị 29,500x osisi gị. Iji ruo nnukwu ihe nrite a jackpot, ịchọrọ enyemaka nke atụmatụ ndị ahụ ekwuru ma bulie uru ha.
Kedu ihe bụ RTP t oghere Golden Glyph 2?
Oghere Golden Glyph two nwere 96.09percent RTP, aka Laghachi t One Player.
Kedu ndị na-eweta egwuregwu wepụtara Golden Glyph 2?
E mepụtara Golden Glyph 2 website na Quickspin. Ọ bụ ihe na-eweta igaming oghere na-eweta
Gịnị bụ volatility t Golden Glyph 2?
Golden Glyph two bụ ọkara volatility oghere.
Versiondị egwuregwu mbụ nke egwuregwu that a bụ nnukwu egwu na Golden Glyph two sokwa. Dị ka a tụrụ anya n’aka Quickspin, egwuregwu a nwere ọmarịcha anya na egwuregwu egwuregwu ọzọ na-atọ ụtọ. Ọzọkwa, Quickspin gosipụtara onwe ya website t ịmepụta egwuregwu na-atọ ụtọ na ọbụlagodi ikike ka mma.
Golden Glyph two na-abịa na nnukwu anụ ọhịa atụmatụ nke na-abịa t payouts dị egwu ozugbo arụ ọrụ. Ngwunye ego ya na-enyekwa ụzọ ndị ọzọ iji merie ma e jiri un tụnyere Golden Glyph. Ọ bụrụ na ị nweela ọ Gụ Golden Glyph, ị ga-ekpori ndụ mgbe ị na-egwu egwuregwu a karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado ụyọkọ ụyọkọ.
Tags:edo Glyph ọla Quickspin RTP
Ihe niile That I Kwesịrị Knowmara Banyere Casinos Arab
Internet casinos na-eto eto na-ewu ewun’ụwa nile ruo oge ụfọdụ …